အမျိုးသမီးများ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရန်မှ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ.? | Tatinhtoo.com
Home > knowledge > အမျိုးသမီးများ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရန်မှ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ.?
အမျိုးသမီးများ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရန်မှ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ.?
admin June 10, 2019 knowledge No Comments
အမျိုးသမီးများ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရန်မှ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
အ၀တ်အထည် စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်း (အ၀တ်အထည် အသစ်တွေကို စမ်းသပ် ၀တ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာ တပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။
2. အ၀တ်လဲခန်းထဲကို ရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
3. ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင် အဲဒီအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera ရှိနေဖို့များသွားပါပြီ။ ဖုန်းခေါ်မရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ hidden camera ရဲ့ ဖိုင်ဘာကေဘယ်က mobile phone လိုင်းကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေလို့ပါပဲ။
နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) နဲ့ ရိုးရိုးကြေးမုံမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဟိုတယ်တွေရဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေက အ၀တ်အစားလဲခန်းတွေ၊ ဟိုတယ်အိပ်ခန်းတွေ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မှန်တွေဟာ
တကယ့်ကြေးမုံပြင် စစ်စစ်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) တွေလား ဆိုတာ သင် သံသယ၀င်ဖူးပါသလား။
Two way mirror ဆိုတာကတော့ သင့်ဘက်ကကြည့်ရင် ကြေးမုံပြင်အနေနဲ့ သင့်ပုံရိပ်ကို သင်ပြန်မြင်နေရပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်က ကြည့်ရင် သင်လုပ်သမျှကို တစ်ဘက်လူက အကုန်မြင်နေရမှာပါ။
ဟောလိဝုဒ် စုံထောက်ကားတွေမှာ တရားခံကို စစ်မေးတဲ့ အခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့မှန်မျိုးပေါ့။ အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့တော့ ကြေးမုံအစစ်လား၊ နှစ်ဘက်မြင်မှန်လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက်မြင်မှန်တွေကို သိနိုင်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော စမ်းသပ်နည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။
1. သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို မှန်ရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ထိထားလိုက်ပါ။
2. သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်က လက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ သင့်လက်ချောင်း လက်သည်းခွံကြားမှာ အနည်းငယ် ကွာဟနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သာမန် ကြေးမုံပြင်ပါ။
3. သင့်ရဲ့လက်ချောင်း လက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ လက်ချောင်း လက်သည်းခွံ နှစ်ခုဟာ တိုက်ရိုက် ထိစပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကြားထဲမှာ အကွာအဝေး မရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာ နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) ပါပဲ။
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်း ကတော့ သာမန်ကြေးမုံပြင်တွေမှာ မှန်ရဲ့ တစ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားပြီး မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာတော့ ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် သင့်လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ မှန်ထဲကပုံရိပ်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်ကြားမှာ မှန်တစ်ချပ်စာ ကွာခြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဘက်မြင်မှန်မှာတော့ ပြဒါးကို မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာ သုတ်လိမ်းထားတာမို့ သင့်လက်ချောင်းနဲ့ မှန်ထဲက လက်ချောင်းကြားမှာ ကွာဟမှု မရှိတော့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှန်ရှေ့ရောက်ရင် မှန်မျက်နှာပြင်ကို လက်သည်းထိပ်လေးနဲ့ ထိကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ဒီစာလေးကို သင့်ရဲ့ “သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ” တွေဆီကို Share လေး လုပ်ပေးပါ။ ဒီစာလေးကို မျှဝေခြင်းအားဖြင့် “အမျိုးကောင်းသမီးများစွာရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ” ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Myanmar Express
ကင်​ဆာ​ရောဂါ ​ရောဂါအတွက်​ အစွမ်းထက်​ ဒူးရင်းသြဇာ	ကင်ဆာရောဂါဟာ အလွန်အင်မတန်မှဆိုးရွားပါတယ် သူဝင်လာလို့ စောစောသိရရင်ကောင်းပါတယ် နောက်ကျလို့ကတော့ဆရာဝန်ကြီးများလည်း အသက်မသေအောင်မကယ်နိုင်ပါဘူး အခြေအနေသိပ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်သက်သက်သာသာအသက်ထွက်အောင်ဘဲပြုစုပေးနိုင်ကြပါတယ် မိဘတွေတွေရော မိသားစုကရော နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ထိုင်ကြည့်နေရပါတယ် ဝေဒနာသည်ဘက်ကလည်း ကောက်ရိုးတစ်မျှင်လေးကိုဘဲ အားကိုမိကြပါတယ် အစပိုင်းမှာ ငွေကုန်ချင်ကုန်ပါစေဆိုပြီး ကုချင်ကြတယ်တချို့လည်း ကုသလို့ ပြန်ကောင်းသွားတတ်တာရှိသလို တချို့လည်း ဆေးအတွက်လေးပြီး ဘေးဖြစ်ကြတာလဲရှိပါတယ် ကင်ဆာဝေဒနာသည်တွေ
ခွေးရူးကိုက်ကိုက် ခွေးကောင်းကိုက်ကိုက် သပြုသီးကို သတိရလိုက်ပါ…!	သပြုသီး_အသုံးဝင်ပုံများ ခွေးရူး (သို့)ခွေးကောင်းဘဲကိုက်ကိုက် သဗြုသီးအလုံးကိုထပ်ချမ်းခွဲပြီး အထဲက အရိအချွဲနဲ့ခွေးကိုက်သည့်အပေါက်ကိုလက်နဲ့ဖိကပ်ထားပေးပါ ၃မိနစ်လောက်ဆိုသူ့အလိုကပ်နေပါလိမ့်မည် အဆိပ်ကုန်မှခွါလို့ရပါမည် သဗြုမြစ်ကိုလည်းသွေးတိုက်ပါ အသုံးလိုရင်တော့ သုံကြည့်လိုက်ပါ လက်တွေ့အသုံးပြုဘူး၍အကြံပေးတာပါ မသုံးလိုရင်မဝေဖန်ပါနဲ့ လူ၏ကံတရားဟာ ဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်မမကယ်တင်နိုင်ပါ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဂတိသစ္စာတည်သောအခါနွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏ သပြုသီး ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ “​​လေးဘက်​နာ
ခွေးချစ်သူများနဲ့ လေလွင့်ခွေးများ ကိစ္စအတွက် စဉ်းစားစရာအချက်များ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀)ကျော် အနုပညာလောကထဲရောက်ရှိချိန်က ပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နေတိုး
Tatinhtoo.com Copyright © 2019.